नेपाली फील्मका चर्चीत ६ नायक, कहाँ छन्? के गर्दैछन् ? -
चलचित्र दुई प्रकारले चल्छ । एउटा कथा र अर्को स्टार कलाकार । चलचित्र चल्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार भने कथा नै हो । केही कलाकारको नामले पनि चलचित्रको सुरुवाती व्यापारमा फाइदा मिल्छ । नेपालमा थोरै कलाकारको नाममा सुरुवाती व्यापार र केही चलचित्रको सफलता कथा र ब्रान्डमा भर परेको पाइन्छ ।
नायक प्रदीप खड्का नेपाली चलचित्रमा चलेको नाम हो । भलै, प्रदीपका पछिल्ला चलचित्रले हलमा दर्शक खासै तानेका छैनन् । तर, उनलाई चलचित्रमा राख्न चाहने निर्माताको कमी छैन । प्रदीप हाल चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’को छायांकन गरिरहेका छन् । यो चलचित्रमा प्रदीप राजकुमारको भेषमा देखिएका छन् । यो चलचित्रको रिलिज अगाडि उनले कुनै पनि चलचित्रमा काम नगर्ने पक्का छ ।
नायक पल शाहको हातमा पनि चलचित्रको अभाव छैन । उनी अभिनित चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ रिलिजको क्रममा छ । फागुन २३ गते यो चलचित्र रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रमा उनी एउटा सुपरस्टार गायकको भूमिकामा देखिँदैछन् । म्यूजिकल लभ स्टोरी चलचित्रलाई सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा उनको जोडीको रुपमा नायिका पूजा शर्माले काम गरेकी छिन् । यो चलचित्रको छायांकन सकिएको केही समय भयो । उनी अभिनित चलचित्र ‘वीर विक्रम २’ रिलिज भइसकेको छ । चलचित्रले निर्माताको लगानी भने बचाउन सकेन । पल शाहले अभिनय गरेको अर्को चलचित्र ‘हृदयभरी’को छायांकन सकिएको छ । तर, यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति यसअघि भदौको अन्तिम सातालाई तोकिएको थियो । तर, काम नसकिएको भन्दै चलचित्रको प्रदर्शन मिति सारियो । अहिले यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय भएको छैन । पल यो चलचित्रमा पोल्टी फार्ममा काम गर्ने एक युवकको भूमिकामा देखिँदैछन् । पल अब नयाँ चलचित्र ‘तिमी हुन्छौ जहाँजहाँ’मा काम गर्दैछन् । दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा बन्ने यो चलचित्रमा पलले नायिका दीपिका प्रसाईँसँग रोमान्स गर्दैछन् । यसरी हेर्दा, पलका ३ वटा चलचित्र लाइनअपमा छन् ।
नायक अनमोल केसी अभिनित कुनै पनि चलचित्र यो वर्ष रिलिजमा नआउने पक्का छ । गत वर्ष, उनी अभिनित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ रिलिज भयो र व्यापारिक रुपमा सफल भयो । अनमोलले यो वर्ष चलचित्र ‘धुपौरे’मा महंगो रकम लिएर काम गर्ने सम्झौता गरे । तर, पछि उनले यो चलचित्र छाडे । यसपछि, उनले गत वर्षको हिट चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’को चौथो सिरिज साइन गरेका छन् । ‘ए मेरो हजुर ४’को छायांकन यसै वर्ष सुरु हुनेछ । तर, चलचित्रको रिलिज भने अर्को वर्ष मात्र हुनेछ । अनमोलले यो चलचित्रका लागि महंगो रकमसमेत लिएका छन् । झरना थापाले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रमा उनको जोडीको रुपमा सुहाना थापाले काम गर्दैछिन् । यो चलचित्रलाई प्रेम कथामा बनाउने तयारी गरिएको छ । अनमोल लभर ब्वाईको भूमिकामा चलचित्रमा देखिँदैछन् ।
नायक विपिन कार्की अभिनित चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ यो वर्ष हिट भयो । जेठमा रिलिज भएको चलचित्रपछि विपिनले नयाँ चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’मा काम गरे । माघको २४ गतेबाट यो चलचित्र रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रमा विपिन एक सफल स्टारको भूमिकामा देखिँदैछन् । एउटा स्टारको संघर्ष र सफलताको तालमेल मिलाउने क्रममा हुने घटनाक्रमको कथामा यो चलचित्र बनेको छ । विपिनले यसपछि, नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने कागजी सम्झौता भने गरेका छैनन् । तर, उनलाई अफरको कुनै पनि कमी भने छैन ।
नायक दयाहाङ राईका लागि यो वर्ष लक्की मान्नुपर्छ । उनी, अभिनित चलचित्र ‘कबड्डी ३’ले बक्स अफिसमा सुपरहिटको व्यापार गर्‍यो । उनैले बनाएको चलचित्र ‘माछा माछा’ भने हलमा लाग्यो र उत्रियो । दया अभिनित नयाँ चलचित्र ‘सेन्टीभाइरस’ फागुनको ९ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रमा दया नेताको भूमिकामा देखिँदैछन् । दयाहाङ राईको हातमा एकपछि अर्को चलचित्रको अफर आइरहेको छ ।
गोंगबु हत्‍या : यसरी पर्दाफास भयो रहस्‍य
भुक्तानी नपाएसम्म मेलम्चीको काम ठप्प पार्ने चेतावनी
August 1, 2019 August 1, 2019 upabhokta Sarokar
सहकारी विभागले नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ ,सहकारीले अब १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने
September 22, 2020 upabhokta Sarokar